लेख > दिन-द्वारा-दिन > गर्न केहि छैन
अर्को म लुन्ड्री गर्न चाहन्छु। लुगा धुने मेसिनमा हुने बित्तिकै ढोकाको बेल बज्यो, त्यो ढोका छिमेकी छिमेकी हो। आधा घण्टा पछि म धुने मेसिनमा स्विच गर्न सक्षम भएँ।
मैले सोचें कि म टिभीमा बिलियर्ड्स फाइनल हेर्न सक्छु। म चर्मको चियाको साथ आर्मचेयरमा आफूलाई सहज बनाउँदै थिए जब फोन फेरि बज्यो। यस पटक यो सदस्यको हप्ताको अन्त्यमा भएको बैठकको बारेमा सोधपुछ गर्दै थियो। उसले टिभीमा फाइनलको अन्तिम चरण हेर्न र मेरो चिसो चिया समाप्त गर्नका लागि ठीक समयमा कुरा गर्न छोडे।
मैले हाम्रो कुनै पनि विदेशी प्रकाशनका लागि सम्पादकीय कार्य गर्नुपर्दछ। आज लेखहरू समाप्त गर्नका लागि सही समय हुनेछ। मेरो ईनबक्समा एउटा ईमेल गुज्र्यो र म तत्काल कुराको प्रकृतिमा प्रतिक्रिया दिन समय लिन बाध्य महसुस गरें।
लन्चटाइम। सामान्यको रूपमा, म एक स्यान्डविच लिन्छु र म फेरि लेखमा जान्छु। फेरि कल आउँदछ, परिवारको एक सदस्यसँग समस्या छ। म कसरी मद्दत गर्न सक्छु भनेर हेर्न काम गर्न रोक्छु। म मध्यरातमा फर्कन्छु र "ओछ्यानमा जान"।
मलाई सहि बुझ्नुहोस्, म गुनासो गरिरहेको छैन। तर मैले महसुस गरे कि परमेश्वरसँग त्यस्तो दिनहरू कहिल्यै हुँदैनन् र यो मेरो लागि असाधारण दिन हो। हामी हाम्रा समस्याहरू वा प्रार्थनाहरूको साथमा परमेश्वरलाई अचम्म मान्दैनौं। उहाँसँग सँधै समय छ। ऊ हामीसँग भेट गर्न आउँदछ हामी कति लामो प्रार्थना गर्न चाहन्छौं। उसले आफ्नो तालिकाबाट समय निकाल्नु पर्दैन त्यसैले उसले दैनिक कामकुरा वा खानको हेरचाह गर्न सक्दछ। उसले हाम्रो ध्यान पूर्ण रूपमा समर्पण गर्न सक्दछ र हाम्रो चिन्ता उहाँमा पुर्‍याउने प्रधान पुजारी सुन्न सक्दछ। हामी उसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छौं।
तर कहिलेकाँही हामीसँग परमेश्वरसँग समय हुँदैन, विशेष गरी व्यस्त दिनमा। अन्य समयमा हामी अक्सर सोच्दछौं कि हामीले जरूरी कामहरू हाम्रो जीवनमा आदरको स्थान दिनुपर्दछ। त्यसोभए ईश्वरले हेर्न सक्नुहुनेछ यदि हामीसँग एक मिनेट वा थोरै भएमा। वा यदि हामीसँग समस्या छ भने। ओह, त्यसो भए हामीसँग परमेश्वरसँग धेरै समय हुन्छ जब हामी समस्यामा पर्दछौं!
कहिलेकाहिँ हामी सोच्छौं कि हामी इसाईहरूले ईश्वरलाई सम्मान गर्दैनौं र उनीहरूलाई पछ्याउँदैनौं भनेर दावी गर्नेहरू भन्दा परमेश्वरप्रति बढी घृणा देखाउँदछौं!
दयालु बुबा, तपाईं हामी सबै परिस्थितिमा र सबै समयमा दयालु हुनुहुन्छ। कृपया हामीलाई सधैं धन्यवाद र ग्रहणशील हुन मद्दत गर्नुहोस्। हामी येशूको नाममा यो प्रार्थना गर्दछौं, आमेन
जोन स्टेटाफोर्ड द्वारा